Bogga ugu weyn 10 Goobood oo Lagu Iibsado Kaarka Hadiyada Online Iyadoo la hubinayo Account
Hadyad ay doorteen ayaa ah hadiyadda ugu wanaagsan ee aad ku fikiri karto inaad siiso kuwa aad jeceshahay. Ma rabi lahayd inaad qarash garayso lacag shay aanay jeclayn ama aanay ku mahadin doonin. Nasiib wanaag, hadda waxaad ku iibsan kartaa kaadhadhka hadiyadda oo leh xisaab hubin oo sii qofka aad rabto si ay si fudud wax u iibsadaan.
Dad badan ayaa dareema inaysan ka iibsan karin kaararka hadiyadda onlayn iyagoo isticmaalaya xisaab hubin. Laakiin tani run maaha sababtoo ah kiis aanad haysan kaarka deynta, waxaad ka iibsan kartaa kaadhadhka hadyada online adigoo isticmaalaya xisaab hubin.
Hoos waxaa ku yaal 10 meelood oo aad ka iibsan karto kaararka hadiyadda onlayn adiga oo isticmaalaya xisaab hubin.
10 Goobood oo Lagu Iibsado Kaararka Hadiyada Online Iyadoo la hubinayo Account
# 1. Amazon
5. Iibsashada ugu Fiican
7. Kaarka eGiftka ee Macy
9. Dukaanka Disney
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo Kaarka Hadiyada eBay?
Halkee ayaan ka isticmaali karaa Kaarka Hadiyada eBay?
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo inta lacag ah ee ku jirta Kaarka Hadyada eBay?
Miyaan u isticmaali karaa kaarka hadiyadda si aan lacag caddaan ah ugala baxo ATM-ka ama ma ku shubi karaa kaarka hadiyadda akoonkayga bangiga?
Waa maxay qiimaha iibsashada kaarka hadiyadda? (ma jiraan lacag dheeraad ah?)
Sideen ku iibsan karaa kaadhadhka hadyada haddii aanan la joogin de
Waa kuwan meelaha hoose.
Amazon waa meesha ugu horeysa ee aad ka iibsan karto kaadhadhka hadyada onlineka oo leh xisaab hubin. Waxay ku iibiyaan waxyaabo badan oo leh dalabyo la yaab leh.
Waxay si joogto ah macaamiishooda u soo bandhigaan qiimo dhimis si ay ugu dhegganaadaan. Halkan, waxaad ka iibsan kartaa kaarka hadiyadda oo aad go'aansatid inaad ku dirto iimaylka, kaarka daabacan, ama qaabka qoraalka.
Intaa waxaa dheer, waa inaad maskaxda ku haysaa inaadan u baahnayn inaad ku xidho akoonkaaga hubinta akoonkaaga PayPal markaad lacag bixinayso. Waxaad si toos ah u bixin kartaa adiga oo isticmaalaya akoonkaaga hubinta ee karti u leh ACH.
Si aad u isticmaasho akoonkaaga hubinta ee karti u leh ACH, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad keento lambarkaaga hubinta iyo nambarka marinka bangiga.
Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa in lagaa baahdo inaad keento aqoonsiga gobolku bixiyay iyo gobolka soo saaray.
Kadib habaynta wax walba, hadda waxaad iibsan kartaa wax kasta oo aad rabto oo ay ku jiraan kaararka hadiyadda. Kaadhadhka hadiyadda waxa lagu soo diri karaa mawduucyo iyo naqshado kala duwan oo qurux badan, iyadoo ku xidhan waxa aad u dirayso, tusaale maalmaha dhalashada, ciidaha, iwm.
Bartilmaameedka, waxaad ka iibsan kartaa kaararka hadiyadda onlayn adiga oo isticmaalaya xisaab hubin. Waxaad ka heli kartaa alaabo kala duwan goobta Target. Alaabooyinkaan waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn qalabka elektiroonigga ah, alaabta guriga, alaabta carruurtu ku ciyaarto, kulan, alaabada armaajooyinka, kabaha, iwm.
Intaa waxaa dheer, kaararka bartilmaameedku waxay ku kala duwan yihiin shirkadaha, waxaana ka mid ah kaararka hadiyadda fiisada Target, Target MasterCard, iyo Target AMEX.
Kaliya haddii aad rabto inaad bixiso hadiyad weyn, waxaa jira kaarar hadiyadeed oo badan iyo shirkado. Bartilmaameedka sidoo kale wuxuu qof walba u bixiyaa waxa loo yaqaan Target REDCard, maalmaha dhalashada, sannad-guurada, iwm sida hadyad qaddarin.
XIDHIIDHKA: Dib u eegis dheeri ah oo kaadhka deynta: Sida ay u shaqeyso
Waxay hadda bixinayaan qiimo dhimis 20% ah kaadhka hadyada ee aad ka soo iibsato App Store, iTunes. Sidoo kale, marka aad u isticmaashid kaadhka cas ee Targetka si aad u iibsato kaadhadh hadiyadeed, waxaad heli kartaa qiimo dhimis 5% ah Starbucks, Google Play, ama Disney.
Waxaad ka akhrisan kartaa tan: Sida Loo Soo Diro Kaararka Hadiyada Online 2022
Walmart waa meel kale oo aad kaga iibsan karto kaadhadhka hadyada onlaynka oo leh xisaab hubin. Halkan, waxaad ku iibsan kartaa kaadhadhka hadyada wax kasta, oo ay ku jiraan ciyaaraha, qaab nololeedka, safarka, makhaayadda, iyo sidoo kale kaadhadhka hadyada ee hore loo bixiyay.
Waxaa jira kun mawduucyo iyo naqshado aad adigu ka dooran karto kaadhadhkaaga hadiyadda. Waxaad sidoo kale keeni kartaa kaararka hadiyadda qaab kasta oo aad rabto - qoraal, iimaylka, ama kaarka daabacan.
Si ka duwan dukaamada kale, waxaa jira kaarar eGift ah oo laga heli karo Walmart, qiimahooduna wuxuu u dhexeeyaa $5 ilaa $20. Waxaad iibsan kartaa kaararka hadiyadda ama kaararka eGift ama labadaba waxay kuxirantahay munaasabadda iibsashada.
Ka dib markaad doorato kaarka hadiyadda ee aad door bidayso, waxaa lagaa doonayaa inaad buuxiso macluumaadka qaar, ka dib markaa waxaad ka iibsan kartaa kaarka hadiyadda online adigoo isticmaalaya xisaab hubin adigoo gujinaya "iibso" badhanka hoose ee bogga.
Ma doonaysaa inaad iibsato alaab casri ah? Haddii aad tahay qof jecel alaabta casriga ah markaa Nordstrom ayaa meesha kuugu ah. Nordstrom waxay iibisaa kaarar hadiyadeed oo leh naqshado iyo mawduucyo cajiib ah.
Sida Walmart oo kale, Nordstrom waxay iibisaa kaadhadhka eGift, iyo qiimo dhimis. Haddii aad iibsato kaarka hadiyadda qiimihiisu yahay $300, waxaad naftaada heli doontaa $50. Sidoo kale, haddii aad iibsato kaarka $150, waxaad naftaada heli doontaa $20. Sida macaan!
Waxyaabo kale oo ku saabsan Nordstrom ayaa ah inaad lacag ku bixin karto adigoo isticmaalaya koontada PayPal.
Sida magacaba ka muuqata, iibsiga ugu fiican ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu iibsado kaararka eGift online isla markaaba koontada hubinta. Best Buy, waxaad ka heli doontaa wax kasta oo tignoolajiyada ah, alaabada ay ku ciyaaraan, ciyaaraha, armaajooyinka, iwm.
Kaliya haddii aad rabto in kaadhkaaga la keeno, Best Buy waxay u qaban doontaa shaqada sida kaarka hadyada elektarooniga ah, kaarka hadyada caaga ah, kaarka hadyada shirkadaha, ama kaadhka hadyada gaarka ah, iyadoo ku xidhan midka aad rabto.
Waxa kale oo aad iibsan kartaa kaararka hadiyadda ciyaaraha, movie iyo kaadhadhka hadyada safarka, kaadhadhka hadyada makhaayadda, kaadhadhka hadyada muusiga, kaadhadhka taleefoonada ee hore loo bixiyay, iyo kaadhadhka wacitaanka ee Best Buy. Kaararkan waxaa lagu heli karaa qiimo kala duwan oo u dhexeeya $15 ilaa $500.
Waa la daabici karaa, qoraal loo diri karaa, ama iimayl ayaa loo diri karaa qaatahaaga waxayna u isticmaali karaan inay ku iibsadaan wax kasta oo ay doortaan dukaanka online-ka ee Best Buy.
Kaarka hadiyadda Apple wuxuu u noqon lahaa mid cajiib ah isticmaalaha iPhone! Qaataha kaadhka hadyada waxa uu u isticmaali karaa kaarka si uu ugu iibsado muusik, apps, qalabyada, agabka, muusiga, apps-ka, iyo qaar kaloo badan isagoo wata kaadhka hadyada dukaanka Apple.
Waxaad ka soo xulan kartaa noocyo kala duwan oo aad shakhsiyeyso adiga oo ku daraya fariin jacayl ama salaan.
Qiimaha kaadhka hadiyadeed ee Apple wuxuu ku kala duwan yahay qaddarka. Qaataha kaadhka hadyada wuxuu heli doonaa kaarkiisa hadyada wuxuuna awood u yeelan doonaa inuu wax kaga iibsado Apple Store ama iTunes.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Warbixinta Daynta sideese u shaqeysaa?
Haddii aad hadiyad u raadinayso saaxiibka ugu fiican ama qofka aad jeceshahay, Macy's waa meel fiican oo lagu hubiyo.
Macy's, waxaad ka heli doontaa waxyaabo casri ah oo u dhexeeya qaab nololeedka ilaa labiska iyo alaabta qurxinta, iwm.
Kaadhadhka hadiyadaha ee u dhexeeya $10 ilaa $1,000 waxa lagu iibiyaa dukaanka Macy oo isla markaaba waa la iibsan karaa.
Mar haddii ay ogol yihiin lacag bixinta PayPal, waxaad lacag caddaan ah uga wareejin kartaa akoonkaaga hubinta bangiga koontada PayPal.
eBay waa suuq weyn oo kuu ogolaanaya inaad iibsato kaarka hadiyadda eBay oo leh xisaab PayPal ah oo ku xiran koontada hubinta. Haddii aad raadinayso meel ku habboon si aad u hesho kaarka hadiyadda, ka dibna hubi eBay.
eBay waxaa loo yaqaanaa inuu yahay caan suuqa suuqa ganacsiyada iyo dadka iibiya waxyaabo kala duwan.
Kaarka hadiyadda waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo iibiyo qalabka korontada, alaabta lagu ciyaaro, qalabka lagu isticmaalo guriga iyo jikada, dharka, kabaha, iyo buugaagta eBay.
Ma ogtahay in aad ka iibsan karto kaarka hadiyadda eBay adiga oo aan u baahnayn in aad akoon samaysato? Laakiin si aad u isticmaasho kaarka hadiyadda, in kastoo, waa in aad leedahay akoon eBay. Ogow in kaadhkani aanu ahayn mid la soo celin karo ama lama wareejin karo.
Waxaad ka iibsan kartaa kaararka hadiyadda eBay qiimo kala duwan oo aad u isticmaasho si aad wax uga iibsato goobta.
Kaararka hadyada calaamadeysan waxa kale oo laga iibsan karaa eBay sababtoo ah waa goob suuq internet wax kasta oo aad ka fikiri karto.
Si aad u magacowdo dhowr, waxaa jira kaarar hadiyadeed oo ka yimid Best Buy, Apple, Walmart, Target, Macy's, Nordstrom, Amazon, iyo Disney.
Kani waa xilliga lagu iibsanayo kaarka hadyada ee dadka aad jeceshahay dukaanka Disney. Waxaa jira nashqado badan oo Disney-themed oo laga heli karo Dukaanka Disney, tani waxay ku siinaysaa dabacsanaan aad ku doorato xulashooyin kala duwan.
Kaarka hadiyadda Disney wuxuu u oggolaanayaa qaatahaaga inuu iibsado wax walba, Disney. Waxay isticmaali karaan kaadhadhka hadyada Disney si ay wax uga iibsadaan onlayn ama goob kasta oo Disney theme park.
Kaadhadhkan hadiyadda ah waxa kale oo loo isticmaali karaa booqashooyinka jardiinooyinka mawduuca Disney, qadada, iwm. Wax kale oo xusid mudan ayaa ah in dhammaan lacagta ku jirta kaadhka hadyada aan hal mar la isticmaalin. Hadhaaga kasta oo hadhay waxa loo isticmaali karaa in wax lagu iibsado marka xigta.
Qiimaha kaadhka hadyada Disney wuxuu u dhexeeyaa $25 ilaa $500. Kaararkani ma dhacayaan wax lacag ahna kuma jiraan.
Waxaa laga yaabaa inay ku xiisaynayso inaad ogaato in kaadhadhka hadyada Disney ay la socdaan sidayaal kaadhadhka hadyada iyo dhoofinta caadiga ah ee bilaashka ah. Sidayaasha kaadhadhka hadyada waxay awood kuu siinayaan inaad u dirto kaarar badan oo dad badan.
Sidoo kale, waad hubin kartaa tan: Sida Loo Helo Kaadhadhka Hadiyada Lacag-La'aanta Ah Ee Online La'aan
Bloomingdale, waxaa jira kaadhka hadiyadda munaasabad kasta. Kaararka hadiyadda waxaa loo iibsan karaa xafladaha sida aroosyada, sannad-guurada, maalmaha dhalashada, xilliyada ciidaha sida Christmas-ka, iwm. Kaararkani waxay ku yimaadaan midabyo iyo naqshado kala duwan.
XIDHIIDHKA: Dib u eegista kaadhka deynta ee ugu fiican 2022
Waxaad si isku mid ah uga iibsan kartaa kaararka hadiyadda onlayn akoonkaaga hubinta ee Bloomingdale sababtoo ah waxay ku qaataan lacagaha PayPal.
Qiimaha kaadhadhkani way kala duwan yihiin. Sidaa darteed, waxaad dooran kartaa midda aad u socoto. Waxaad u diri kartaa kaadhadhka hadyada Bloomingdale siyaabo kala duwan sida iimaylka, qoraalada, iwm.
Qaatahu maaha inuu ku bixiyo lacagta caddaanka ah oo dhan. Isaga/iyadu way dhamayn karaan qayb oo way haysan karaan inta hadhay. Sidoo kale, waxay kala socon karaan dheelitirkooda bogga rasmiga ah ee Bloomingdale.
Kaararka hadyada eBay waxaa laga heli karaa Kroger, Walgreens, iyo ganacsiyada kale ee maxaliga ah.
eBay, kaadhadhka hadyada dhijitaalka ah hadda lama heli karo. Si kastaba ha ahaatee, waxay hadda ku shaqeynayaan khibrad ka wanaagsan.
Kadhka hadiyadda ee eBay waxaa loo isticmaali karaa in lagu iibsado alaabta eBay.com.
Waxaad isticmaali kartaa Hubinta Hadhaaga Kaadhka Hadyaddooda si aad u hubiso dheelitirka Kaadhka Hadyada eBay.
Maya, ma awoodid Kaararka hadiyadda, iyadoon loo eegin magacooda, waxaa si gaar ah loogu sameeyay iibsasho kaliya. Ma isticmaali kartid ATM-ka ama macaamil ganacsi si aad u hesho lacagaha ku jira kaadhadhkaaga hadiyadda.
Ma jiraan wax kharash ah oo firfircooni ah marka la iibsanayo kaarka eGift ama kaararka ganacsiga.
Si aad u iibsato kaarka hadiyadda, waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso khidmad iibsi oo le'eg qiimaha lacagta caddaanka ah ee kaadhka.
Waxaad kaararka hadiyadda ku iibsan kartaa onlayn akoonkaaga hubinta haddii aanad kula socon.
Kaararka hadiyaddu waa kaadhadhka prepaid-ka ah ee loo isticmaalo in wax lagaga iibsado online dukaamada maxaliga ah. Kaararkan waxa kale oo laga heli karaa xarumaha bangiyada ee kala duwan.
Waa inaad marka hore ku shubtaa kaarka xoogaa lacag caddaan ah (badanaa inta u dhaxaysa $500 iyo $10,000) ka hor inta aanad qof hadiyad ah siin.
Waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa mid gaar ah adiga oo ku daabacaya magaca qaataha kaarka.
Sidoo kale, waxaad ka iibsan kartaa kaararka hadiyadda dukaamada kaararka hadiyadda laakiin habka online ayaa aad loogu talinayaa sababtoo ah ku habboonaanta.
Kaliya haddii aadan haysan kaarka deynta/debit-ka, waxaad ka iibsan kartaa kaarka hadiyadda online adigoo isticmaalaya xisaab hubin.
Maqaalkani waxa uu sharaxay halka aad ka iibsan karto kaararka hadiyadda onlayn oo leh xisaab hubin.
Reviews Beston - Kaararka online
Itgust - Reviews
Dhaqaalaha rubuci hore - Hubinta khadka tooska ah
https://www.dignited.com/75789/buy-giftcards-online-in-nigeria/ (Isha sawirka URL)
Sida Loo Soo Diro Kaararka Hadiyada Online 2022
Sida Loo Isticmaalo Kaarka Hadiyada Dalku-galka ee Online 2022
20ka Kaararka Hadiyadaha ugu Fiican 2022
Sida Loo Helo Kaadhadhka Hadiyada Lacag-La'aanta Ah Ee Online La'aan
Ma ku iibsan kartaa Kaararka Hadiyada Kaadhadhka Hadiyada? Ogow Sida.
Dib u eegisyada Amaahda Shakhsi ahaaneed ee SoFi
Waa maxay Kharashka furitaanka Meheradda Salon timaha?
Barashada ku saabsan maaliyadda, marnaba dhib ma leh inaad bilowdo da'da hore. Gaar ahaan haddii ay la macno tahay…
Sida Loo Helo Kadhka Badbaadada Bulshada ee Beddelka
Kaadhka dammaanad qaadka bulshadu waa heerka ugu sarreeya ee ilaha aqoonsiga. Waa muhiim…
Dib u eegis dheeri ah oo kaadhka deynta: Sida ay u shaqeyso
Kaarka Debit-ka dheeraadka ah ayaa wax ka beddela malaayiin Maraykan ah. Hal sabab oo kaarka deynta dheeriga ah waa…
Haddii aad u baahan tahay inaad samayso wax kala beddelasho gaar ah adoon lacag caddaan ah qaadan, waxaad u baahan doontaa…
Waa maxay APR Wanaagsan ee Kaarka Daynta? Sidee bay u shaqeysaa?
Waxaa laga yaabaa inaad aragtay ereyga APR, ama heerka boqolkiiba sannadlaha ah markaad wax iibsanayso amaahda baabuurta, amaahda guryaha, ama…
15-ka Kaararka amaahda ee ugu Wanaagsan ee Horumarka Guriga 2022
Inkasta oo hagaajinta gurigaagu ay u egtahay fikrad wanaagsan, wax mudan in la sameeyo, waa inaad sidoo kale ogaataa in…